Romelu Lukaku oo shaaca ka qaaday inuusan ku faraxsanayn Chelsea | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Ciyaaraha Romelu Lukaku oo shaaca ka qaaday inuusan ku faraxsanayn Chelsea
Romelu Lukaku ayaa daaha ka qaaday in aanu haatan ku faraxsanayn xaaladiisa kooxda chelsea isla markaana uu doonayo in uu mustaqbalka dhaw kulaabto kooxda Inter Milan .
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Belgium ayaa dhaliyay 64 jeer 95 kulan oo uu u saftay Inter intii u dhaxeysay 2019 iyo 2021 ka hor inta uusan ku laaban Stamford Bridge heshiis 97.5 milyan ginni xagaagii.
Lukaku ayay ku adkaatay inuu soo bandhigo qaab ciyaareedkiisa ugu fiican kooxda Thomas Tuchel inkasta oo uu shabaqa soo taabtay 7 jeer 18 kulan oo uu saftay tartamada oo dhan.
28-sano jirkaan ayaa sheegay in uusan ku faraxsanayn xaalada Chelsea sababo la xiriira nidaamka Tuchel, wuxuuna aad u doonayaa inuu ku laabto Inter waqti aan fogeyn.
“Jir ahaan waan fiicanahay, laakiin kuma faraxsana xaalada Chelsea, Tuchel waxa uu doortay in uu ku ciyaaro nidaam kale – kama quusan doono, waxa aan noqon doonaa xirfadle, kuma faraxsani xaalada Lukaku ayaa u sheegay Sky Italia .
“Waxaan u maleynayaa in wax walba oo xagaagii hore dhacay aysan ahayn inay sidan oo kale u dhacaan…sida aan uga soo tagay Inter, qaabkii aan uga soo tagay kooxda, sida aan ula xiriiray taageerayaasha Inter – tani way i dhibaysaa sababtoo ah ma ahayn waqtigii saxda ahaa.
Lukaku, oo qalinka ku duugay heshiis shan sano ah kooxda heysata Champions League markii uu yimid, ayaa shabaqa soo taabtay kulankii Brentford ee Premier League Arbacadii.
Weeraryahanka Paris Saint-Germain Kylian Mbappe ayaa xaqiijiyay inuusan ku biiri doonin Real Madrid suuqa kala iibsiga ee Janaayo. 23-sano jirkaan ayaa qarka u saaran inuu galo lixdii bilood ee...
Atletico Madrid oo koobka Champions League-ga ka Cirib tirtay Manchester United
AC Milan oo dooneysa inay xagaaga lasoo wareegto Steven Bergwijn.
Paris Saint-Germain oo ku dhow inay lasoo wareegto Zinedine Zidane
DEG DEG: Sacuudiga oo shaaciyay maalinta u horeysa ee bisha Ramadaan
Deg Deg Ehelada Ikraan Tahliil oo Sheegay In Ay Aargoosan Doonaan...
Wararka Suuqa kala iibsiga: Real Madrid oo Dalab ka gudbisay Xidiga...